Islaam - Wikipedia
Islaam (; ; loogu dhawaaqo: al-'islām) macnihiisane "Waa isu dhiibid Allaha", kalmada Islam waxey ka timid kalmada carabiga ah oo loola jeedo salaam ama nabadgalyo. Waa diinta oo ka tirsan diimaha Ibraahiim, ee usoo dhiibay nabigii ugu danbeeyay ee Muxamed oo ka dib la isticmaalo ducada "nabadgalyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee". Nacaybta ama horjeedka diinta Islaamka waxaa loo bixiya Islaamofoobiya
Xajka oo kuyaalo Sacuudi Carabiya waxuu ka mid yahay Shanta Tiir ee islaamka.
Islaamka kooxo badan ayay leedahay, sidaa Shiicada, Sunniyiinta, Ahlu Quraan, Ibaadinimada, iyo Ghair madhhabiyaasha. Dhulka Soomaaliya waxaa diinta ilaalin u ahaa oo weliba dhawrid u ahaa waa qaranka Darwiish uu Qusuusigii Diiriye Guure madax ka ahaa, uu Ismaaciil Mire na abaanduul guud ka ahaa.
Diinta islaamka waa diin wanaagsan oo Allah noogu soo dhiibay nabigeena suuban ee muxammad (scw) NNKH wuxuu ahaa nabigii ugu dambeeyay ee lasoo diro kadib nabi ciise(cs)
1 Bulshada Islaam-ka ee Calaamka
2 Diinta Islaamka
3 Tiirarka Islaamka iyo Tiirarka Iimaanka
3.1 Tiirarka Islaamku waxay ka kooban yihiin shan tiir oo kala ah:
3.2 Tiirarka Iimaankuna waxay ka kooban yihiin lix tiir oo kala ah:
4 Tiirarka Islaamka
5 TIIRARKA IIMAANKA
6 Siirada Rasuulka Muxammed sallalaahu caleyhi wasallam
6.1 Casharka 2aad ee Kitaabka Siirada Nebiga Muhammed SCW
6.2 Casharka 3aad ee Kitaabka Siirada Nebiga Muhammed saas
6.3 CASHIRKA 5 EE QISADA NABI MOHAMMED SALLALAHU CALAYHI WASALLAM
6.4 Casharka 6aad ee Kitaabka Siirada Nebiga Muhammed SCW
6.5 Casharka 7aad ee Kitaabka Siirada Nebiga Muhammed SCW
6.5.1 Tani waa Werintii Bukhaari
Bulshada Islaam-ka ee CalaamkaEdit
Ummadaha maanta haysta Diinta Islaam-ka way fara badantahay sida aad ku aragto qariirada midig kore ee boggan. Tirada bulshada caalamka ee qarnigan Muslim ah waxay kor u dhaafaysaa 1,300,000,000 hal bilyan sadex boqol oo milyan oo qof.
Jasiirada Carbeed oo diinta ay ka bilaabatay waa laga dad badanyahay inta Diinteena Furqaan aaminsan. Hindiya, Indoniishiya iyo Shiinaha ayaa wadan wadan marka la yiraah ugu Muslim badan wadama aduunka. ilaahey halaga cabsado
Waxaa kale oo uu Rasuulkeennii suubanaa naxariis iyo nabadgalyo Eebbe korkiisa ahaataye yidhi:-" Waxa uu la mid yahay wixii Ilaahay ila soo diray ee Hanuun iyo Cilmi (aqoon) ahi sida roob helay dhul, waxaana ka mid ah (dhulkaas), meel (carro san ah oo) fiican oo biyihii qaadatay, soona saartay baad iyo doog badan , waxaa kaloo ka mid ah (dhulkaas roobku helay) meel dirri(dhul adag ah) oo biyihii qabatay Ilaahayna waxtar uga dhigay dadkii, oo ay markaa ka cabbeen kana waraabsadeen kana beerteen, waxaa kale oo uu helay (roobkii) meel kale oo (dhulkii ah) oo aan ahayn mooyaane dhul siman oo aan qaban biyo baadna soo saarin, waxaana sidaas ka dhigan sida qof dhugtay(fahmay) diintii Ilaahay , waxna uu u taray wixii Ilaahay ila soo direy oo markaas wax bartay (laftiisu) waxna baray (dadka kale), iyo sida mid aan madaxaba koru soo qaadin ( aan wax ka taransan wixii laila soo diray), aan qaadan hanuunkii Ilaahay ee la igu soo diray" Bukhaari iyo Muslim baa wariyay.
Diintuna Ilaahay agtiisa waa Islaamka Eebbe nasahnaa oo korreeye wuxuu yidhi:-" Diintu Iaahay agtiisa waa Islaamka" Suuradda Aala-Cimaraan qayb ka mid ah aayadda 19aad. Nabiyadii Ilaahay soo diray oo dhanna Diintaas kaliya ee Islaamka ah ayuun bay addoomada ilaahay soo gaadhsiinayeen, Eebbe nasahnaa oo korreeye wuxuu yidhi:- "Wuxuu idiin jideeyay (Eebbe) xagga Diinta wixii uu u dardaarmay (Nabi) Nuux iyo wixii aannu u waxyoonay (Nabi Maxamadow) xaggaaga, iyo wixii aanu u dardaanay (Nabi) Ibraahiim iyo (Nabi) Muuse iyo (Nabi) Ciise, inay oogaan Diinta, aydinaan kuna kala tagin dhexdiisa " Suuradda Ashuuraa qayb ka mid ah aayadda 13aad. Nabigeeniina isagoo arrintaas innoo caddaynaya wuxuu yidhi:- " Nabiyadu waa walaalo kala baho ah hooyooyinkood kala duwan yihiin diintooduse mid tahay".
Laga soo billaabo aabaheen nabi Aadan Naxariis iyo nabadgalyo eebbe korkiisa ahaataye ilaa laga soo gaadho Nabigeennii suubanaa naxariis iyo nabadgalyo eebbe korkiisa ahaataye waxay dadka ugu baaqayeen hal jid oo ahaa jidkaas diinta Islaamka ah , jidkaas oo ah ka addoonka u ridaya dariiqa loo marayo Jannada Ilaahay addoomadiisa wanwanaagsan u yaboohay, kii diin kale raacaana Eebbe ka yeeli maayo. Eebbe nasahnaa ookorreeye wuxuu yidhi:-" Qofkii ka yeesha waxaan Islaamka ahayn Diin laga aqbali maayo isaga ,aakhirana wuxuu ka mid noqon kuwa khasaaray" Suuradda Aala-Cimraan aayadda 85aad
"و"من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين.                                                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Barashada Diinta Islaamkuna waa waajib saaran qofka muslimka ah, taasoo noqonaysa waajib sharci ah. Diinta Islaamkuna waa tiirar ay ku taagan tahay iyo dhismaha tiirarkaasi hayaan, kaasoo koobaya hab nololeedka dhammaan dhinacyada nolosha ee dadka muslimiinta ah.Tiirarka diintuna waxay ka kooban yihiin laba tiir oo kala ah:-
Tiirarka Islaamka iyo Tiirarka IimaankaEdit
Tiirarka Islaamku waxay ka kooban yihiin shan tiir oo kala ah:Edit
Qiritaanka Ilaahay mooyee inaanu Ilaah kale oo xaq lagu caabudaa jirin, Muxamedna Rasuulkii Ilaahay yahay.
Soonka Bisha Ramadaan
Tagitaanka Xajka qofkii kara
Tiirarka Iimaankuna waxay ka kooban yihiin lix tiir oo kala ah:Edit
Rumaynta Kututbtii Ilaahay soo dejiyay
Rumaynta Rusushii Ilaahay soo diray
Rumaynta Maalinta Qiyaame
Rumaynta Qaddarka (Go'aaminta) Ilaahay Khayrkiisa iyo Sharkiisaba
Rumaynta tiirarkaasina waa kuwo ka soo go'a qalbiga qofka muslinka ah fal qabashaddiisuna ay rumayso, Eebbe nasahnaa oo korreeye loo gaar yeelo dartiina loo qabto.
S aynu haddaba u fahamno aynu shanta tiir ee Islaamka iyo lixda tiir ee Iimaanka aynu mid mid u soo qaadno si aynu aqoonta sharciyeed ee waajibka ah aynu xilkeeda u gudanno si aynu raalli ahaanshaha Ilaahay u helno nolosha adduun iyo nolosha dambe ee aakhiroba.
Qiritaanka ah ALLAAH mooyee inuusan kownkaan ka jirin mid awood leh oo awoodiisa loogu dulloobo, loogana cabsado, laguna rajeeyo, loona baryo, sharcigiisana lagu kala baxo, ALLAAH maahee, Muxamadna uu Rasuulkii Ilaahay yahay:- Waa albaabka uu qofku Islaamnimada kasoo galo, waana in qofku qalbiga ka rumeeyaa in Ilaahay mooyee aanu jirin Ilaah kale oo xaq lagu caabudaa carabkana uu ka yidhaahdo isaga oo odhanaya "اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله ""Ash-hadu Allaa Ilaaha Illallaahu Wa Ash-hadu Anna Muxamadun Rasuulu-Laah", dhaqankiisan ay ka muuqato waxa uu qiray. Haddaba bal aynu hoos ugu degno waxa uu Qiritaanku koobayo.
Salaadda:- Waa tiirka laf dhabarka u ah diinta Islaamka waana shan Salaadood oo uu addoonku tukanayo habeenkii iyo maalintii, waana fal ka kooban quraan akhrin,ducaysi,Ilaah waynayn iyo samayn dhaqdhaqaaqyo u gaar ah oo ay Salaaddu leedahay sida Rukuucda iyo Sujuudda.Ka tagisteeduna waxay shaki galinaysaa qofka Islaamnimadiisa, haddaba si aynu u barano waxa la innooga baahan yahay ansaxa Salaadda aynu hoos ugu daadagno casharadan.
Sakada:- Waa tiirka saddexaad,waxaana ay waajib ku tahay dadka hantida leh in ay in go'an oo ay diinta Islaamku u goysay ay Sako u bixiyaan si loo siiyo dadka ay ku baxdo, qofkii diidana dawladda ayaa xoog kaga qaadaysa si loo gaadhsiiya dadkii xaqa u lahaa, qofkii jiritaankeeda beeniyana diinta Islaamkaayuu kaga baxayaa.
Soonka:- Waa tiirka afraad,waana waajib saaran qof kasta oo muslin ah, waana wajib ah in qofku ka soomanaado cuntada, cabitaanka, iyo galmoodka laga bilaabo marka waagu dillaaco ilaa laga gaadhayo cadceedu marka ay dhacdo , qofkii jiritaankiisa beeniyana diinta Islaamka ayuu kaga baxayaa.
Xajka:- Waa tiirka shanaad,waxaana ay waajib ku tahay dadka kari kara ee hanti u haysta uu ku xajiyo,waana halmar inta uu nool yahay, isagoo addoonku tagaya Maka si uu u soo guto Xajka isla markaana booqanaya Madiina , qofkii jiritaankeeda beeniyana diinta Islaamka ayuu kaga baxayaa.
Rumaynta Ilaahay nasahnaa oo korreeye:- oo ah in addoonku rumeeyo kalinimada Ilaahay, isla markaana uu qalbiga ka rumeeyo in Ilaahay mooyee aanu jirin Ilaah xaq lagu caabudaa, rumeeyana in Ilaahay nasahnaa oo korreeye uu abuuray adduunka iyo waxa ku gudo jiraba cir iyo dhulba,isaguna uu iska leeyahay wax kastoo uuman, Eebbana yahay ha arrin iyo taloo dhamiba ay gacantiisa ku jirto, cid la wadaagta maamulidda uunkanna aanay jirin.Haddaba bal aynu hoos ugu degno waxa ay rumayntu koobayso
Rumaynta Malaa'igta:- oo ah in addoonku uu rumeeyo jiritaanka Malaa'igta oo ah addoomo Ilaahay ,amaradiisana ku shaqeeya wuxuu fara sameeya,waa addoomo Ilaahay ka abuuray nuur ,dadkuna aanay arki karin ciddii Ilaahay tuso mooyaane.Haddaba si aynu aqoon buuxda uga helno
Rumaynta Kutubta Ilaahay soo dejiyay:- Oo ah in addoonku uu rumeeyo kutubtii Ilaahay ku soo dejiyay Rusushii uu u soo dirayay addoomadiisa si ay u raacaan jidka toosan ee uu Ilaahay addoomadiisa kaga raalli ahaaday, jidkaas oo ah in Eebbe nasahnaa oo korreeye ay caabudaan, jidkaas oo ah ka ay dhammaan Rusushii Ilaahay naxariis iyo nabadgalyo Eebbe korkooda ahaataye ay ugu baaqayeen addoomadiisa. Si aynu haddaba aqoon guud uga helno kutubtii Eebbe nasahnaa oo korreeye uu soo dejiyay
Rumaynta Rusushii Ilaahay soo diray:-Oo ah inaynu rumaynu dhammaan Rusushii Ilaahay (naxariis iyo nabadgalyo Eebbe korkooda ahaataye) uu u soo diray addoomadiisa si ay u gaadhsiiyaan amarada iyo distuurka uu Ilaahay nasahnaa oo korreeyetrololololololololololoibfhgidfgdufhgsdghdfbgdjbgdsjbgjsdbgjsbgjdfsklgkdsjfbgdfskbgdskjlbglkdfjbgkldfbgkdfbgkldsfbgskldfbgksldgblkdfsbglksdgbksdggggggggggb u dejiyay addoomadiisa inta ay adduunka sii joogaan si aanay u raacin jidka uu Shaydaan la doonayo inay raacaan si uu uga leexiyo jidkaas toosan ee uu Eebbe nasahnaa oo korreeye uu addoomadiisa raalli uga noqday. Si aynu haddaba u barano Rusushii Ilaahay inta Ilaahay nasahnaa oo korreeye uu inaga garansiiyo
Rumaynta Maalinta Qiyaame:- Oo ah in addoonku uu rumeeyo jiritaanka maalin dadka oo dhan lasoo bixin doono marka la wada dhinto, lana xisaabin doono, maalintaas oo noqon doonta maalin Ilaahay nasahnaa oo korreeye uu xisaabin doono addoomadiisa, qof kastana uu heli doono abaal marin wixii uu gaystay ah intii uu adduunyada joogay xumaan iyo samaanba, waana maalinta dadku ay taagan yihiin maxkamaddii uu Eebbe nasahnaa oo korreeye uu ku ballan qaaday inuu dadkoo dhan taagi doono maalintaas, maalintaas oo sida uu Eebbe nasahnaa oo korreeye Quraanka innoogu sheegay maalin ku adag ah dadka argagaxa wayn ee jira darteed, si aynu sawir guud uga qaadanno
Rumaynta Qadarka (U garashada Eebbe addoonkiisa u garto) sharkiisa iyo khayrkiisa:- Oo ah in addoonku rumeeyo wixii Eebbe nasahnaa oo korreeye uu qadaro inta nolosha adduunka la joogo, qadarkaas oo noqon kara mid khayr ah iyo mid dhib ah, iyadoo uu addoonku qalbigiisa ka rumaynayo in adduunkan hagistiisu ay Ilaahay nasahnaa oo korreeye gacantiisa ku jirto,wax aanu Ilaahay dooninna aanu adduunkan ka dhici karin wax uu doonay inuu ka dhacana cid horjoogsan kartaa aanay jirin , si aynu haddaba rumaynta qaddarka Eebbe wax uga ogaanno ogaano
Labadaa tiir ee Islaamka iyo Iimaanka rumayntooda iyo ku dhaqankoodu waxay addoonka u horseedaan badhaadhe adduun iyo mid aakhiraba, waxaana ay u jeexaan jid toosan oo addoonka ka dhigaya xubin noloshiisa oo dhami ay wanaag iyo khayr u tahay naftiisa iyo bulshadaba,waayo waxa uu dadka faraana waa khayr waxa uu ka reebaana waa halaag iyo burbur. Si aynu haddaba wanaagsanaantaas u falanqayno aynu isla gorfayna wanaagga ay diinta Islaamu farayso qofka muslinka, cutub walbana gaarkiisa hoos ka akhriso. diinta islamdu waa diin oo dadka ey aminsanyihiin isssssssslam
Siirada Rasuulka Muxammed sallalaahu caleyhi wasallamEdit
NASABKII RASUULKA SCW Sida la wada ogsoon yahay nasabka Rasuulka SCW ama abtirisiinyihiisu wuxuu galaa nabiyullaahi Ismaaciil oo uu dhalay nabi Ibraahim. Abtirsiinyada nabiga SCW waxay u qaybsantaa saddex qaybood: Qaybta u hooreysa marka nabiga SCW laga soo bilaabo waxay ku eg tahay ilaa Cadnaan, waana qayb culimada islaamka oo dhan ay isku waafaqsan tahay isla markaasna la hubo sixadeeda; Qaybta labaad oo iyaduna ka bilaabato Cadnaan waxay ku eg tahay ilaa nabi Ismaaciil, hase yeeshee waa qayb ay culimadu isku khilaafsan tahay sixadeeda in badan oo culimada ka mid ihina way ka gaabsadaan, qaar kalena way ka hadlaan; Qaybta saddexaad oo ka bilaabata nabi Ismaaciil ilaa laga gaaro nabi Aadan aad ayaay u adag tahay xaqiijinteeda iyo sixadeeda waxana wanaagsan in laga dhowrsada oo aan la dhex dabaalan.
Waxaan markaa soo qaadaneynaa qaybta ugu horreysa ee ay culimada islaamku isku waafaqsan yihiin dhabnimadeeda hadday noqon lahaayeen kuwii hore iyo kuwii dambeba, waxaana weeye sidatan:
Maxammed binu Cabdullahi binu Cabdimudhalib (Shaybah) binu Haashim (Camar) binu Cabdimanaaf (Muqiira) binu Qusayi (sayd) binu Kilaab binu Murra binu Kacab binu Nadar (Qays) binu Kinaana binu Khuseyma binu Mudrik (binu Ilyaas binu Mudar binu Nisaar binu Macad binu Cadnaan.
Rasuulka SCW jilibkiisa waxaa la oran jirey reer binu Haashim, waxaana loogu magac daray awoowgiisii labaad, Haashim binu Cabdimanaaf. Haashim wuxuu ahaa nin ka sheegganaa reer Makka, wuxuu waraabin jirey xujeyda oo uu aabbihiis Cabdimanaaf ka dhaxlay, sidoo kale wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee jideeyey labadii safar ee suuratul Quraysh sheegtay oo ay qurayshtu u kala safri jirtay Shaam iyo Yamaan.
Haashim Wuxuu dhalay afar wiil oo kala ahaa: Asad, Abu Seyfi, Nadla' iyo Cabdimudhalib iyo shan gabdhood oo kala ahaa: Sharaf, Khaalida, Daciifa, Ruqiya iyo Junna. Waxaa sagaalkooda ugu yaraa Cabdimudhalib oo ahaa nibiga SCW awowgiis.
Cabdimudhalib siduu ku dhashay waxay ahayd aabbihiis Haashim ayaa Safar ugu kacay Shaam, wuxuuna sii maray Madiina oo uu ku guursaday kulana aqalgalay Salma bintu Camar. Haashim wuxuu sii watay safarkiisii Shaam. Markuu Shaam tegey ayuu xanuunsaday, muddo dabadeedna wuxuu ku geeriyooday magaalo la yiraahdo Qusa oo Falastiin ku taala. Salma, oo uur lahayd markuu Haashim tegey, waxay dhashay wiil ay u bixisay Sheyba. Haashim markuu dhintay waxa mas'uuliyaddii waraabinta xujeyda qaaday walaalkiis Mudhalib. Mudhalib markuu hawshaas muddo hayey ayuu Madiina aaday si uu u soo wado wiilkii uu walaalkiis Haashim ka tegey (Sheyba). Markuu Madiina yimid ayuu Salma ka codsaday inay wiilka ku darto hase yeeshee way u diidday, markaasuu ku yiri "waxaan u dhiibayaa hawshii aabbihiis iyo xaramkii Alle", sidaa ayeyna ugu dartay. Mudhalib markuu Makka ku soo noqday isagoo wiilkuu adeerka u ahaa wada, ayaa waxaa arkay dadkii Makka joogey markaasey wiilkii u maleeyeen addoon uu Mudhalib soo iibsaday sidaas darteed ayey wiilkii ku dheheen Cabdimudhalib (addoonkii Mudhalib), markaasuu mudhalib ku yiri "war hooggiinee, waa wiilkii walaalkay Haashim". Sidaas ayaa wiilkii Sheyba ahaa kula baxay naaneystaas Cabdimudhalib.
Cabdimudhalib wuxuu dhalay toban wiil iyo lix gabdhood, waxaana tobanka wiil lakala odhan jiray: Xaarith, Subayr, Abuu Dhaalib, Cadullahi, Safar, Cabbaas, Xamsa, abuu Lahab, Qiyidaaq, Muqawim. Lixda Gabdhoodna waxay kala ahaayeen: Safiya, Arwa, Ummu Xakiim, Bara'Caatika iyo Ummayma. Cabdimudhalib wuxuu noqday nin cajiib ah oo qureysh oo dhan ka tilmaaman, wuxuu noqday odeygii qureysheed sida lo ogsoon yahayna wuxuu leeyahay qisooyin caan ah oo kala duwan, halkanna aynaan ku soo wada koobi karin, waxaana ka mida ahaa Duullaankii Abraha iyo Qodiddii Samsamka, kuwaas oo isaga iyo qureyshba Ilaahay ugu gargaaray.
Casharka 2aad ee Kitaabka Siirada Nebiga Muhammed SCWEdit
DUULLAANKII ABRAHA UU KU SOO QAADAY KACBADA Abraha oo ahaa nin xabashi ah oo yaman wakiil uga ahaa boqorkii xabashida ayaa markuu arkay sida carabbi kacbada ugu xajineyso waxaa galay maseyr markaasuu magaalada Sanca ka dhisay kaniisad aad u weyn isagoo raba inuu carab ka jeediyo xajkii ay kacbada u xajin jireen.
Casharka 3aad ee Kitaabka Siirada Nebiga Muhammed saasEdit
QODIDDII SAMSAMKA IYO NADARKII ABDI MUDHALIB Maalin ayaa Cabdimudhalib oo hurda manaam loogu yimid lana amray inuu faago ceelka samsamka oo muddo hore duugmay, meel uu ahaana aan la garanayn. Manaamkii ayuu ku weydiiyey meeshuu ceelku ahaa waana loo sheegay. Goortuu hurdadii kxk.vkldlka kacay ayuu meeshii tegey isaga oo uu la socdo wiilkiisii Xaarith oo uu markaas carruur ka qabay wuuna qoday. Markii ceelkii la helay ayaa qureysh kula doodday oo tiri: "Cabdimudhalibow waa ceelkii aabahayo Ismaaciil waxaana ku leenahay xaq ee aan kula wadaagsano." Hase yeeshee Cabdimudhalib wuu ka diidey arrinkaa oo wuxuu yiri: "mayeelayo arrinkaan aniga ayaa la igu khaas yeelay". Muddo markii la dooday oo arrinkii lagu kala bixi waayey ayaa la go'aansaday in loo xukun tago habar wax sheegsheegta. Habartii ayaa la wada aaday. Goortii meel cidla ah oo dhexe la marayo ayaa Cabdimudhalib iyo nimankii jifadiisa ahaa, ee reer Cabdimanaf, biyihii ka go'een markaasey raggii kale ee qureysh oo la socday weyddiisteen, hase ahaatee wey u diideen iyagoo ka baqaya in ay dhammaantood oon u wada dhintaan.
Cabdimudhalib markuu arkay xaaladdu meeshay marayso iyo inay halis ku jiraan, meesha ay marayaanna ay tahay saxaraa wax ka dhowna uusan jirin, ayuu ku yiri raggii jifadiisa ahaa "nin walba qabrigiisa ha qoto hana dul fariisto, hadba kii dhintana waa aasaynaa". Sidii ayey yeeleen laakiin markay muddo joogeen ayaa Cabdimudhalib yiri "ma wanaagsana inaan meeshan iska fadhino ee aan soconno". Markuu hashi
isii fuulay oo ay dhaqaaqday ayaa biyo ka soo burqadeen meeshay lugta ka qaadday, biyihii ayuu cabbay dhammaan raggii qureysh ee la socdeyna wuu ugu yeeray. Markay kulligood cabbeen, weelashiina ka buuxsadeen ayey Cabdimudhalib ku yiraahdeen" Ilaah baan ku dhaarannaye arrinkii waa laguu xukumay, dib dambana Samsamka kugula doodi mayno, Ilaahii meeshaan saxaraha ah biyaha kaa siiyey yaa Samsamkana ku siiyey ee u noqo waraabbintaadii, waxba habar u tegi maynee".
Markaa ayuuu Cabdimudhalib wuxuu ku nadray in haddii Ilaahay toban wiil siiyo oo ay wada hona qaadaan uu midkod Kacbada agteeda Alle darti ugu gowraco, halkaas ayaa markaas dib looga soo laabtay, meeshii markii hore loo socday.
Cabdimudhalib markii Ilaahay tobankii wiil siiyey oo ay wada hanaaqaadeen ayuu isugu yeeray oo u sheegay nadarkiisii, markay ku wada raalli noqdeenna sanamkii Huda ahaa ayuu ag geeyey una qori tuuray tobankoodii markaasaa waxaa soo baxay qorigii Cabdullaahi oo ahaa wiilkii uu carruurtiisa ugu jeclaa, Cabdimudhalib middi ayuu soo qaatey, wiilkiina gacanta ayuu soo qabsaday oo kacbada dhinaceeda la aaday si uu u gowraco hase yeeshee qureysh ayaa wiilkii ku dhegtay oo u diiday inuu gowraco siiba abtiyaashiis reer bani makhsuum, Cabdimudhalib wuxuu yiri sidee baan nadarkaygii yeelayaa, markaasay kula taliyeen inuu aado habar wax sheegta. Habartii markuu u tegey ayey ku tidhi "magtiinnu waa meeqa?" markaasuu ugu jawaabay "toban halaad", ka dib ayey tidhi "toban halaad iyo isaga u qori tuur, haddii ay tobanka halaad soo baxaan gowrac, hadduu isagu soo baxana geelii kordhi oo toban kale ku dar. Ka dib sidaa geela u kordhi oo hadba toban ku dar ilaa uu geelu soo baxo oo Rabbigiis ka raalli noqdo". Cabdimudhalib waa soo laabtay wuxuuna u qori tuuray toban halaad iyo wiilkii hase yeeshee waxaa qorituurkii ku dhacay Cabdullaahi, ka dib geelii ayuu hadba toban ku darayey qorituurkuna ku dhacayeye Cabdullaahi illaa uu gaadhsiiyey boqol geel ah oo qori tuurkiina ku dhacay geelii. Ka dib Cabdmudhalib wuxuu gowracay boqolkii geela ahaa.
Markaa wixii ka dambeeyey magtii qureysheed ee tobanka geelo ah ahayd waxaa noqotay boqol geel ah, islaamkuna markuu yimid boqolkii ayuu u sugay, oo uddaayey, Rasuulka SCW wuxuu yiri: "Anigu waxaan ahay ina labo gowrac" oo uu ula jeedo nebi Ismaaciil iyo aabbihiis Cabdullaahi.
Waxaa aan qisadaan iyo kuwa la midka ahba ka fahmeynaa sida qureyshu ahaayeen dad diin lahaa hase ahaatee shirki iyo inxiraaf galay, arrimo badanna waxay ku dhaameen dad badan oo maanta islaamka u nasab sheeganaya. Arrimahaas oo aannaan halkan ku koobi karin oo u baahan in iyaga kaliya qoraal ama baaritaan laga sameeyo waxaa tusaale inoogu filan sida markay dhib ku timaaddo ay Ilaahay keliya u baryi jireen ama siday ballanta u ilaalin jireen ammaanadana u xifdin jireen, beentana uga xishoon jireen, nadarkana u oofin jireen. Waxaana xaqiiqa ah in dad badan oo maanta islaamnimo sheegnaya aanan arrimahaas oo dhan laga wada helaynin aysanna nadar oofintiis u gowracayn ilmohooda ama boqol geel ah.
Cabdullaahi, oo sidaan soo sheegnayba ahaa nebiga aabbihiis, waxaa hooyadiis la odhan jirey Faadumo bintu Caa'id binu Cimraan binu Makhsuum. Cabdullaahi wuxuu guursaday Aamino bintu Wahab binu Cabdimanaaf binu Suhra bin Kilaab, waxayna isku dhisteen magaalada Makka, muddo yar ka dibna, Aamino oo uur leh, ayaa Cabdullaahi arrin u baxay oo aadey Madiina, halkaas oo uu ku geeriyoodey. Da'diisu waxay markaas ahayd 25 sano.
CASHIRKA 5 EE QISADA NABI MOHAMMED SALLALAHU CALAYHI WASALLAMEdit
QISADII BAXIIRA Markuu Rasuulka SCW 12 sano jirey ayaa adeerkiis Abii-dhaalib iyo rag kale oo qureysh ka mid ah ay safar ugu kicitimeen dhinaca Shaam, wuxuu markaa Rasuulku scw ka codsadey adeerkiis inuu raaco, adeerkiisna waa uu ka yeelay. Dabadeed ma rkuu safarkii baxay waxaa uu sii maray meel la yiraahdo Busra oo ay safarrada qureysheed ee Shaam u socda sii mari jireen uuna degganaa nin raahib (suufi) ahaa oo Baxiira la oran jiray heystayna diinta masiixiga, cilmina u lahaa waxyaalihii uu ilaahay ku sheegay Tawreet iyo Injiil.
Ninkaas raahibka ah safarrada qureysheed waa ag mari jireen danna kama geli jirin; laakiin maanta waxaa uu arkay calaamooyin ku saabsan wiilkan yar oo safarka la socda, calaamooyinkaas oo kutubtii hore lagu sheegay, markaas ayuu ninkii martiqaad u sameeyey safarkii oo dhan. Waa ay la yaabeen waxayna yiraahdeen "weligayo waannu ku ag mari jirney martiqaadna nooma aadan samyn jirin ee maanta maxaa jira?", wuxuu ku yiri waa sax laakiin marti baad tihiine imaada. Markii ay u yimaadeen wuxuu yiri "Ma cid baad ka soo tagteen?", waxay ku jawaabeen yar ayaannu rarkii uga soo tagnay. Baxiira ujeeddadiisu waxay ay ahayd wiilka yar markaasu ku yiri "u yeera gabanka".
Markii la qadeeyey ayuu Baxiira su'aal weyddiiyey Abii-dhaalib oo uu ku yiri "wiilkan mxaad u tahay"? wuxuuna ugu jawaabey "Aabbe ayaan u ahay". Baxiira waxa uu yiri "suurogal maaha in wiilkan aabbihiis nool yahay ee maxaad u tahay?
". Abii-dhaalib waxaa uu yiri "Adeer baan u ahay", intaa ka dib Baxiira wiilkii ayuu gees ula baxay wuxuuna weyddiiyey su'aalo, ugu dambeyntiina wuxuu ka arkay khaatumkii nebinimda oo nabiga scw garbihiisa dhexdooda ku yaalley.
Baxiira wuxuu ku yiri Abii-dhaalib "wiilkani arrin weyn ayuu yeelan doonaa, waxa aan anigu ka fahmeyna haddey nimanka yahuudda ihi ka fahmaan waa ay dilayaan ee ku celi magaaladiisii kana ilaali yahuudda", Abii-dhaalib markii uu alaabtiisii soo gateyba si degdeg ah ayuu ugu soo rogmaday Makka. Markaas ka dib waxaa uu Rasuulku SCW Makka ka baxay hal mar oo kale illaa hijrada laga gaarey. Rasuulka SCW markuu soo barbaaray waxa uu bilaabey inuu buuraha Makka ariga ku ilaaliyo
Casharka 6aad ee Kitaabka Siirada Nebiga Muhammed SCWEdit
GUURKII KHADIIJA Markuu Rasuulka SCW 25 sano gaaray wuxuu guursaday Khaddiija bintu Khuweydlad. Khaddiijo waxay ahayd qof maalqabeen ah quruxna leh oo ka sheegganayd haweenkii qureysheed, waxayna da'deedu ahayd markaas 40 sano. Ka hor waxay soo guursatay nin ay laba carruur ah u soo dhashay. Khaddiijo maalkeeda ayay hadba qof u dhiibi jirtey si uu ugu tijaareeyo waxayna wax ka siin jirtey faa'iidada. Waxay maqashay Maxammed binu Cabdullahi scw runtiisa, dabeecaddiisa wanaagsan iyo ammaanadiisa oo Makka oo dhan caan ka ahayd oo loogu magac daray loona bixiyey Maxammed Aammiin. Markaas ayey u yeertay Nabiga SCW una soo badhigtay inuu xoolaheeda maanta u tijaaro geeyo. Rasuulka SCW waa uu ka yeelay oo tijaaradii ayuu qaaday, waxayna ku dartay wiil u joogey oo la yiraahdo Maysara.
Nabiga SCW iyo Maysara waxay xoolihii u qaadeen Shaam halkaas oo uu Nebiga SCW ku soo iibiyey xoolihii uu kexeeyey isla markaasna wuxuu soo gaday wixii Makka looga baahnaa. Faa'iido aad u badan ayuu Nebiga SCW Khaddiijo u soo hooyey taasoo u keentay kalsooni dheeraad ah iyo in ay aragtay ammaanadii iyo akhlaaqdii Rasuulka SCW.
Maysara wuxuu u sheegay Khaddiijo waxyaabo mucjiso ah oo uu Nebiga SCW ku arkay, sidaa daraadeed Khaddiijo markay ka aragtay Nebiga SCW arrimahaas iyo waxa la midka ah, waxay Rasuulka SCW u soo bandhigtay iney is guursadaan. Rasuulka SCW wuxuu la soo tashaday adeerradii wayna ka aqbaleen weyna u dooneen oo labadii eheyl ayaa isku yimid, halkaas ayaana Rasuulka SCW loogu meheriyey Khaddiijo.
Khaddiijo, oo uu Nebiga SCW qabay ilaa uu 50 sano dhaafay, waxay Nebiga SCW u dhashay carruurtiisa oo dhan marka laga reebo Ibraahim oo ay dhashay Maariyatul Qibdhiya. Waxayna Nabiga carruurtiisu ahaayeen saddex wiil oo la kala oren jirey: Ibrahim, Qaasim iyo Cabdullaahi (oo la oran jirey Dhayib iyo Daahir) iyo afar gabdhood oo la kala oran jirey: Seynab, Ruqiyo, Ummu-khalthum iyo Fadumo. Saddexda wiil wey saqiireen hase yeeshee gabdhihii way hanaqaadeen oo islaamka ayey la kulmeen weyna wada islaameen.
Gabdhaha waxaa loo kala guursaday sidatan: Seynab waxaa guursaday Abil Caas; Ruqiya iyo Ummu-kalthum waxaa kala guursaday laba wiil oo Abii lahab oo Nebiga SCW adeerkiis ahaa uu dhalay. Ninkaas oo Rasuulka SCW aad u dhibay caqabadna ku noqday dadkii iney islaamka qaataan ayaa markay soo degtay suuratu lahab wuxuu, Abii lahab u yeedhay labadiisii wiil wuxuuna ku yiri: "u fura Maxammed labadiisa gabdhood" wayna fureen ka dibna waxaa labadii gabdhood iska daba guursaday Cismaan binu Cafaan oo ay labadiiba k dhinteen; Faadumo waxaa iyada guursaday Cali bin Abii Dhaalib oo ahaa Nabiga scw ina adeerkiis.
Nebiga SCW carruurtiisa oo dhan way ka wada hor dhinteen Faadumo oo lix bilood ka dambeysey maahane, waxaana carruurtiisa ugu waynaa Qaasim, waxaa ku xigtay Seynab, waxaa ku xigtay Ruqiya, waxaa ku xigtay Umu-kalthum, waxaa ku xigay cabdullaahi oo ugu yaraa bah khadiija. Rasuulka scw carruurtiisu waxa ay dhasheen Naginimada ka hor Cabdullaahi iyo Ibraahim maahane, Cabdullaahi waa la isku khilaafaa in uu nabinimada ka hor dhashay iyo in uu ka dib dhashay, waxaase loo badan yahay in uu Nabinimada kadib dhashay. Ibraahim isagu wuxuu ku dhashay madiina sannadkii 8aad ee hijriga waxaana dhashay maariyatul qibdhiya saan soo tilmaanayba.
Casharka 7aad ee Kitaabka Siirada Nebiga Muhammed SCWEdit
DHISITAANKII KACBADA Sida la sheego waxaa la yidhaahdaa kacbada waxaa dhisay malaa'ig ama Nebi Aadam laakiin Qur'aanka iyo axaaddiista midna kama hadlin arrinkaas, sidaa darteed waxaa xaqiiqo ah oo Qur'aanka iyo axaaaddiistuba sheegeen in Nabi Ibraahiim iyo wiilkiisa Nabi Ismaaciil ay dhiseen. Waqtigii qureysheed, Nebiga oo 35 sano jira ah ayey qureysh waxay dheheen kacbadii maaddaama ay duugowday waa in aan dhisnaa oo aan maal u ururinaa, waxayna isku dhaarsadeen in aysan kacbada ku dhisin illaa wax xalaal ah maahane iyo in aysan gelin naag saaniyad ah xoolaheeda iyo xoolo Riba ah iyo wax qof bani aadam ah laga dulmiyey.
Nimankii qureysheed markii ay kacbada dhisaayeen waxaa ka go'ay xoolihii xalaasha ahaa ee ay haysteen sidaa daraaddeed waa ay ka soo soka mariyeen kacbada dhismihii Nabi Ibraahim labada tiir ee Shaam xigay. Markii ay dhismihii dhammeeyeen ayey isku khilaafeen ciddii xajarul-aswadka booskiisii dhigi lahayd maxaa yeelay qabiil walba wuxuu rabay inuu isagu magaca qaato.
Markuu arrinku qir iyo qir daadhey ayey waxay go'aansadeen qofka ugu horreeya ee albaabkaas ka soo galaa inuu kala saaro. Nasiib wanaag qofkii ugu horreeyey ee albaabkii ka soo glay wuxuu noqday Nabiga SCW markaas bay ku farxeen oo waxay dheheen waa Max'ed Aammiin kulligayo raalli baan ka nahay. Arrinkii bay Nagiba SCW u sheegeen markaas buu wuxu yir: "ii keena go", markii go'ii loo keenay buu yiri: "qabiil walba nin ha keeno" markii qabiil kasta nin keenay ayuu dhagaxii go'ii ku dhex riday nin walbana uu dhinac qabtay, markii meeshii la gaarsiyeyna intuu kor u qaaday ayuu saaray.
Arrintaan oo kale meelaha ay qureyshtu ku dhaantey dad badan oo maanta islaam u nasab sheeganaya maxaa yeelay qureyshi waxay garatay in cibaadada Alle iyo beytkiisa aan lagu dhisin xoolo xaaraam ah laakiin in badan oo muslimiin ahi waxaa laga yaabaa ineysan taas fahmin oo cibaadada ilaahay ay xaaraam u adeegsadaan, wax badan oo khayr ahna ay xaaraam geliyaan sida masaajiddada iwm.
Sidoo kale Ilaah way rumeysnaayeen, sida marka la yidhaahdo yaa abuuray cirka iyo dhulka, idinkana yaa idin irsaaqa, roobkana yaa keena waxay dhihi jireen "Allaah". Asnaamtana waa ay ogaayeen in aysan Ilaahyo ahayn laakiin waxay u sameeyeen suurado dad wanwanaagsan sida Nabi Ibraahiim iyo Nabi Ismaciil waxayna dhihi jireen Ilaah baannu ugu dhowaaneynaa, sida maantaba dadka u yidhaahdaan awliyada Ilaah baannu ugu dhawaaneynaa. Sidoo kale markay ku safraan badda oo dhibi ku timaaddo Ilaahay ayey baryi jireen, laakiin maanta dad muslimiin sheeganaya ayaa hadday dhibi ku timaaddo awliyada keliya baryaya ama Ilaah iyo awliyada amaba Ilaah iyo Nabiga SCW.
asc WAAJIBNIMADA SOOMIDDA BISHA RAMADAAN FADLIGEEDA IYO ARRIMO KU SAABSAN
Allaah, Subxaanahu Watacaala wuxuu yiri:
“ Kuwa xaqa ruyeeyoow waxaa laydinku waajibiyay Soonka sidii loogu waajibiyey kuwii idinka horreeyey si aad u dhawrsataan (aad xumaha ka joogtaan)." Suurada al-Baqrah:Aayada 183. Waxa kale oo Allaah SWT yiri:
"Waa Maalmo tirsan ee ruuxii idinka mid ah oo buka ama Safar ah waxaa korkiisa ah ayaamo kale (soonkood) kuwa uu dhibina waxay bixin <quudin> Miskiin, ruuxii badsada (Khayrkana) saasaa u fiican, inaad Soontaan yaana idiin khayrbadan hadaad tihiin kuwo wax og." Suurada al-Baqrah:Aayada184.
" Waa bisha Soon ee la soo dajiyey dhexdiisa Qur'aanka isagoo hanuun Dadka u ah, iyo caddayn hanuun iyo kala bixin xaqa iyo baadilka, ee ruuxii jooga (nagi) ha Soomo, ruuxiise buka ama Safar ah waxaa saran maalmo kale, wuxuu idinla dooni Alle fudayd ee idin lama doonayo culays, waana inaad dhamaystirtaan tirada waynaysaanna Allaah wuxuu idinku hanuuniyey, waxaadna u dhawdihiin, ood mudan tihiin inaad mahadisaan Allaah." (Suurada al-Baqrah:Aayada 185)
1214. Abuu Hureyra (A.K.R.) wuxuu yirir: Nebigu (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) wuxuu yiri: Allaah, kor ahaaye wuxuu yiri: aadanuhu camalladiisa kale oo idil isagaa leh soonkiisa ma’ahee, kaasi anigaa leh oo anigaa abaalkiisa gudi doona. Soonku waa gaashaan la isaga gudbo xumaan falidda iyo Naarta. Sidaa awgeed markii uu midkiin sooman yahay waa inuu iska hayaa oo ka joogaa af xumo oo ka fogaadaa laqwi ku hadlid iyo hadal xun uu qof dhaafsado. Haddii uu qof la diriro ama caayana ha yiraahdo anigu waan soomanahay. ‘ Waa igu Alle ay nafta Muxammad ku jirto Gacantiisa neefta afka qofka soomman Alle agti waa ka udgoon tahay miskiga caraftiisa.’ Qofka soommani wuxuu la kulmaa laba farxadood, tan hore waa farxaa markii uu afuraayo, tan labaadna waa uu ku farxi doonaa ajarka soonkiisa, markii uu la kulmo Rabbigiis (Allaah). (Bukhaari iyo Muslim)
Tani waa Werintii BukhaariEdit
Werin kale oo Bukhaari baa waxay intaa raacineysaa: Alle wuxuu yiri: ‘ qofka soommani wuxuu uga tagaa cunid, cabbid iyo hawoodkiisaba (aniga Allaah) dartey, marka anigaa soonka iska leh aniga baana ka abaal gudi doona. Camallada kale ee wanaagsan (ee la falaa bisha Rammadaan ama bilaha kale) halkii ajar waa la toban laabaa.
Werinta Imaam Muslim waxay leedahay: Qofka camalladiisa wanaagsan waa loo laalaaba wax badan oo halkii samaan waa toban lab ilaa toddoba boqol lab. Alle kor ahaaye wuxuu yiri: ‘Laakiinse kuma jiro soonka, maxaa yeelay waa cibaado ii barax tiran oo loo falaa dartey ( macnaha waa ma laha xad abaal gudka iyo ajarka soonka) Aniga, Keliya, baa ka abaal gudi doona. (Qofka soomman) wuxuu uga tagaa cunid, cabid iyo hawood dartey Aniga (Allaah). Qofka soommani waxaa u sugnaaday laba farxadood, midda hore waa farxad markii uu afurayo midda labaadna waa farxad kale markii uu la kulmo Rabbigiis (Allaah). Neefta afkiisuna ka udgoon Aragtida Alle udgoonka miskiga.’ (Muslim)
1215. Abuu Hureyra (A.K.R.) wuxuu yiri: Nebigu (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) wuxuu yiri: ‘Qofkii u bixiya laba joogood ee wax uun ah Alle dartii, waxaa looga yeeri doonaa iridaha Jannada: Addonkii Alloow, albaab kan baa kuu roon. Qofkii reero salaadeed ahaa waxaa looga yeeri doonaa irridka Salaadda, qolooyinkaa ugu heeganaa Jihaadka dar Alle, waxaa looga yeeri doonaa irridka Jihaadka, qofkii reera soon ahaana waxaa looga yeeri doonaa irridka Rayaan (harraad baxa), qofkii reero sadaqo ahaana waxaa looga yeeri doonaa (inuu ka galo Jannada) irridka Sadaqada. Abuu Bakar (A.K.R.) wuxuu yiri: Rasuul Alloow, kugu furtay aabbahay iyo hooyadeeye, qofkii irridahaas looga yeeraayo ma jiraan wax lama huraan ah oo laga rabo, qof irridahaas oo dhan looga wada yeedhaayo ma jiraa? Nebigu S.C.W. wuxuu ku jawaabay: Waa jiraa, waxaana rajeynayaa inaad adiga (Abuubakari) ahaan doonto mid ka mida. ‘ (Bukhaari iyo Muslim).
1216. Sahal bin Sacad (A.K.R) wuxuu yiri: ‘ Nebigu (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) wuxuu yiri: ‘ Waxaa jira Jannada gudaheeda irrid la yiraahdo Ar-Rayaan oo ehlu soonkii oo keliya geli doonaan Maalinta Qiyaame, qof kalena uusan ka gelin; waxaa la oran doonaa: ‘ Meeye ehlu soonkii? Waa soo kici doonaan, cidina ma geli doonto iyaga moomaahee. Markii ay galaan, irridkaa waa la xiri doonaa, cid kalena ma geli doonto iyaga dabadood. (Bukhaari iyo Muslim)
1217. Abuu Saciid al-Khudri (A.K.R.) wuxuu yiri: Nebigu (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) wuxuu yiri: ‘ Qofka Muslimka ahi markii uu u soomo hal maalin dar Alle, Alle wuxuu ka fogeeyaa Naarta masaafo toddobaatan sano loo socdo. (Bukhaari iyo Muslim)
1218. Abuu Hureyrah (A.K.R.) wuxuu yiri: ‘ Nebigu (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) wuxuu yiri: ‘ Qofkii u sooma bisha Ramadaan iimaan qab iyo ajar dalab, waa laga dhaafi doonaa dembiyadii horey uga dhacay (aan ka baa’irta aheyn. (Bukhaari iyo Muslim)
1219. Abuu Hureyrah (A.K.R.) wuxuu yiri: ‘ Nebigu (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) wuxuu yiri: ‘ Markii ay bisha Ramadaan soo gasho iridaha Jannada waa la furaa, iridaha Naartana waa la xiraa, Shayddaammadana waa la xiraa. Bukhaari iyo Muslim)
1220. Abuu Hureyrah (A.K.R.) wuxuu yiri: ‘ Nebigu (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) wuxuu yiri: ‘ Ku sooma aragtida bil dhalatay ee Ramadaan oo ku afura aragtida bisha Shawaal (soon fur), haddii bila qaris ay noqotana buuxiya soddonka Shacbaan (Soon dheere) (Bukhaari iyo Muslim)
Werin kale oo Imaam Muslim werinaayo waxay intaa ku dareysaa: Sidaa si la mid ah, haddii bil qaris ay nqoto (daruuro awgeed) dhamaadka bisha Ramadaan, markaa buuciya soonka (soon qaad) 30 maalmood
↑ Islām—The Way to God by Submission (en)
↑ Iimaan Run ah Waa Waddada Nolol Farxad Leh
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Islaam&oldid=234199"
Last edited on 12 Abriil 2022, at 15:53
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 12 Abriil 2022, marka ee eheed 15:53.